Ngwurugwu na-enuba Global: Ewelite oghere ndị ọzọ eji mkpọchi ala, Mgbanwe Dị elu, na TCO | | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Ngwurugwu na-enuba Global: Ewelite ebe ndị ọzọ na-eme mkpọda nke Lower Delay, Higher Scale, na TCO dị ala
Streaming Global emebere ụzọ iji nyefee usoro mmiri ọkụ na-egbu oge n'ogo iko ụwa site na iji akụrụngwa ọkọlọtọ, ebe ọ na-agbadata ụgwọ maka usoro maka ndị isi na ndị na-enye ọrụ. The Streaming Global patented na teknụzụ na-echere ịgbachi igwe na-atụgharị sava nchekwa nchekwa igwe ojii ọ bụla ka ọ bụrụ ihe nkesa na-egwu ndụ ngwa ngwa, na-enweghị ịwụnye ngwanrọ ọ bụla ọzọ na sava ahụ. Nke a na - eme ka ndụ, akara, OTT, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana VOD na iji ihu igwe ụwa na - arụ ọrụ karịa ndị na - eweta igwe ojii, dị ka Microsoft Azure, Amazon AWS, na igwe ojii / nke nzuzo. Site n'ụzọ pụrụ iche iji na-enuba ozugbo site na sava nchekwa nchekwa igwe, Streaming Global na - ekpochapụ akụkụ kachasị arụmọrụ nke sistemụ igwe na - agba ọsọ, na - abawanye oke ọsọ ma belata ụgwọ ọrụ.
Jiri usoro teknụzụ zuru ụwa ọnụ na-aga n'ihu iji nweta:
Ohere dị ala na-egbu oge / igbu oge - iyi na-eru 60x ngwa ngwa karịa ọkpọkọ mmiri na-ebugharị yana ihe dị 20x ngwa ngwa karịa eriri na satellite na-eweta, na-ewetara ndị na-ekiri ihe na-emenụ karịa ka ha na-eme ihe ha hụrụ n'anya.
A pụrụ ịtụkwasị obi na ntanetị-reaminggbasa oke egwu ụwa ka ọtụtụ iri nde ndị na-ekiri ebe ọ bụla n'ụwa site na iji aka ha kee ya.
Ngwakọta iyi na mmekọrịta data - Ọ bụ oge ọhụụ maka ihe omume dị egwu! Site na Streaming Global, ị nwere ike ịmekọrịta onye na-elele na ngwaọrụ ọ bụla na otu ihie ahụ, na-enye ndị ọrụ gị ahụmịhe ịhụkọ ọnụ. Dịka ọmụmaatụ, chee uru dị na ịkụ nzọ dị na egwuregwu: ịbawanye uru na ikike ị nwekwuo ngbanye egwuregwu.
Ntinye ngwa ngwa karịa / nhicha - Site na iji Streaming Global ị nwere ike itinye mgbasa ozi na mpaghara ọ bụla, na-enweghị ịgaghị ma ọ bụ na-egbochi isi iyi, mgbe ị na-eme ka ahụmịhe mgbasa ozi dị ka elele. Ndị mgbasa ozi nwere ike hazie mgbasa ozi maka onye ọ bụla so na ndị na-ege ha ntị.
Obere nke TCO (ego zuru oke nke onye nwe ya) na Ojiji Ike - Belata ọnụ ọgụgụ nke nnyefe gị belata belata ike ị na-eji teknụzụ kachasị arụ ọrụ. Ikpokoro gi nwere ike mezuo nke a site na iji ihe omuma ndi kariri uzo izizi mbu .Viewers choro ntughari enweghi nkenke mgbe ha na - agbanwe igwe ndi ha na - ele. Ha chọrọ ka ha nwee ike iso ndị na-ekiri ihe ndị ọzọ na-ekwu okwu n’igwe nyiwe. Ha chọrọ ịmara na onye ọzọ eriteghị uru na egwuregwu ịkụ nzọ. Deliveryzọ nnyefe usoro mgbakọ a kara aka ma enweghị ike igbo mkpa a - ruo taa.
Teknụzụ na-enuba Global's zuru oke maka ịgbanye ọwa 24/7 OTT na ihe omume ndụ na-enwe otu ọdịnaya na ọtụtụ iyi. O bu ihe nlebara anya nke oge a diri ndi kompeni na ndi n’enye oru choro inye ha ihe kachasi nma ha nwere.
Enwere ike ibunye ọdịnaya gị site na igbu oge nke abụọ ruo ọtụtụ iri nde ndị na-ekiri maka obere ego ị na-akwụ ugbu a.
Ka agha ndị agha na-enwusi ike, a na-achọ onye na-ekiri ya ngwa ngwa karịa mgbe ọ bụla, agha maka ikpo okwu na ndị na-enye ọrụ iji nye ahụmịhe kachasị mma nọ na oge niile. Mgbasa ozi na-aga n'ihu na ntinye aka na nnyefe IP, na ụlọ ọrụ na-achọ inyefe ahụmịhe nlele kachasị mma iji mezuo chọrọ. Na nwute, ụzọ nnyefe nke ugbu a enweghị ike igbo mkpa a ma nọgide na-agbasi mgba ike idozi isi ihe mgbu dị na arụmọrụ, ọnụego na ọnụ ahịa nnyefe ..
Egwuregwu Live Performance Live (a na-emekọrịta na obere igbu oge) agaghị enwe ike na ntanetị ọha na eze n'ọtụtụ, ruo taa.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara Streaming Global, biko gaa www.StreamingGlobal.com
Onye na-ahụ maka mgbasa ozi Igwe ahia mgbasa ozi Onyinye Graham Chapman Prmoted toEditor Litra Matthews OTT Ụgha & Akụrụ nchekwa Ngosi Injinia 2020-05-15
Previous: Onye ọkachamara na-emepụta ihe - Ọkwa Nbanye
Osote: Igwefoto igwefoto ohuru nke B & H na-eme ihe osise